Omdala Imidlalo - Dlala Ngesondo Imidlalo & Porn Imidlalo Kuba Free
I-hottest ngesondo imidlalo ingaba esiza kuwe kuba free
Omdala imidlalo ngokuchasene coronavirus: Yenza ekunene ukhetho
Kukho ilanlekile ka-omdala imidlalo mihla. Nangona kunjalo, omnye umdlalo umenzi ezifumeneyo i-zilungile kwaye kanjalo eyodwa indlela ukukhuthaza yayo umdlalo kuba free kwaye, ngexesha elinye, isibheno ukuba ingozi zisasaza coronavirus usulelo. Ividiyo umdlalo umenzi Kagami Imisebenzi sele egqibe ekubeni isithuba 90,000 free iikopi omdala imidlalo, kunye eyona omnye ngokuba Jonga kwi-Isitshayina, ukugcina abantu emakhayeni abo kwaye njalo ukucutha kunabela ye-usulelo. Bonke abemi kuya kufuneka ukuba benze ukufumana ukuba lo mdlalo ukucofa ifowuni inani, kukhankanyiwe njengenxalenye wokuphakanyiswa kofikelelo kulwazi le inkampani ngokuba "Wuhan, sisebenzisa nani!".
Umdlalo inikezela enkulu ukhetho girls abaya "gcina inkampani" kunye abadlali xa hiding kwi-virus kwi-ndlu. I-promotion of eli inkampani kwacacisa ukuba ibe okulungileyo ishishini shenxisa, njengoko evidenced yi-eyokuba Kagami, emva kokuba omnye kuphela usuku lonikezelo ka-omdala imidlalo, kwafuneka anike ingxelo ezongezelelweyo 20,000 downloads free. I-Jonga sicinezela i-scantily clad girls ukuba umdlali kufuneka yoyisa ezahlukeneyo puzzles ukuthatha kwabo ngaphandle. Umdlalo iyafumaneka kuba 0.,79 dolla, ngoko ke Kagami ingaba ukwahlula hluleka kakhulu imali ngokunika kuya kude, kwaye free ukwazisa uwonke-wonke ngu wabuyela kwabo amaxesha amaninzi phezu.
Nangona abanye kuba kugwetywa i company kuba usebenzisa i-virus ukuba ezisulelekileyo kwaye bambulala ilanlekile abantu China, abaninzi bavumelana ukuba yiya ikhuthaza ekhuselekileyo ukuziphatha. Umdlalo ukhokela abadlali ukuba uhlale ekhuselekile emakhayeni abo, kwaye kanjalo underscores ukubaluleka ukuhlamba izandla zabo kaninzi kangangoko kunokwenzeka, nto leyo ngokuqinisekileyo iingcebiso ezilungileyo - nokuba ngaba i-epidemic ngu ngokuqhubekayo okanye hayi.
Nintendo ingaba uthando ukubona omdala imidlalo kuba ngaphezulu mature ababukeli bomdlalo bangene kwindlela yayo Tshintsha console
Nangona Nintendo ithathe kwi indima kumpapashi we-usapho imidlalo, i company ikhangeleka kuba uyise kude ukuba intengiso isicwangciso-qhinga kwaye ilungiselela ukudada kuwo ngocoselelo ngakumbi mature kwamanzi. Nintendo ikhangeleka ube ujonge ukuba hambela kude yayo esiqhelekileyo indima njengokuba kumpapashi we-usapho imidlalo. Ngamanye amazwi, ngokunxulumene i-inqaku kwi-Eludongeni Street Journal, oku Isijapanese inkampani reportedly ikhuthaza ababhekisi phambili ukuzisa omdala imidlalo kuba ngaphezulu mature audiences yabo Tshintsha console.
Ukongeza kwi-hellish-gazi kwi-Asigwebele kwaye imfazwe kwi-Wolfenstein 2, sinako silindele ezinye kodwa kanjalo ngocoselelo ezahlukeneyo omdala imidlalo ngomhla wokuqala we-bt console. Umzekelo, Shinobi Refle: Senran Kagura, umdlalo apho kuwe massage sexy girls, kwaye Nights ka-Azure 2: Bride Entsha, Nenyanga, isenzo RPG kunye scantily clad ibhinqa iimpawu, ngu-uza ukuswitsha., Iphezulu ukuba, ngaphambili, kuya lwaqiniselwa ukuze sibe izakuba shooting horny girls kwi-Gal Gun 2 nge pheromone kwi-Tshintsha ngokunjalo, apho surprised umdlalo ababhekisi phambili kwabo ngenxa yokuba akazange silindele enjalo isihloko ngonaphakade kwenzeka ubomi kwi Nintendo ke console.
Nintendo ngu urging abanye violent okanye risky ividiyo umdlalo publishers ukubonelela ngocoselelo ezahlukeneyo isiqulatho ngenxa yabo Tshintsha console ukuba tarnish usapho-kuphela icebo manufacturers' umfanekiso. Abanye ababhekisi phambili ibango ukuba Nintendo sele "bendiye egqithileyo ngoko ke, ukuza kuthi ga ngoku," xa ke iza violent kwaye risky amagama eencwadi. Nangona kunjalo, onjalo azinako wathi ngenxa yabo ngoku stance. Kwesinye isandla, Nintendo kuchazwe ukuba "njengoko kunye iincwadi, lwethelevijini, kwaye iimifanekiso; ezahlukeneyo isiqulatho ngu alungiselelwe ezahlukeneyo audiences "., Kubalulekile akukho exaggeration ukuthi ukuba expansion ka-ingqokelela ka-omdala imidlalo kwi-Tshintsha yi tricky indlela Nintendo intends ekulweni yokhuphiswano bemelwe imali eseleyo iintengiso ye-PlayStation 4 kwaye i-Xbox One-X-console.
I-pornographic inguqulelo Yokugqibela Quanta XV ayikho kukunceda kakhulu lokulinda 10 iminyaka kuba
Kamsinya emva kokuba ukhuphe Zokugqibela Quanta XV, apho siya bebe ilinde iminyaka elishumi, a porn parody zaphuma ukuba waba hurried kwaye hayi phantse njengoko okulungileyo, ngoko ke kakhulu ngoko ke sasivuya nkqu kancinci offended. Zokugqibela Quanta XV ke umdlalo ukuba waba basebenza kuba iminyaka elishumi, kwaye ukuba kolona yonke into ekugqibeleni ukwazi ukuba ndiyavuyiswa yayo loyal ababukeli bomdlalo bangene. Epheleleyo-Nkonzo Sovavanyo yi pornographic parody ye-Brazzers inkampani, uncharacteristically hurried kwaye ngokupheleleyo ayiphumelelanga umzamo phakathi omdala imidlalo., Uza kuxelela nokungabikho amakhonkco kwaye videos kule iindaba kuba obvious izizathu, kodwa trust nathi - ke na ukuba ukhe ubene ilahlekile ngaphandle kakhulu kakhulu.
Nkqu isihloko kwayo ayiyi nkqu ekuthatheni yoqobo, nangona siya admit ukuba zabo i-logo ngu iselwa okulungileyo. Kodwa emva kokuba i-logo, yonke into waya ezingachanekanga. Eyona uphawu ngu bald Sean Lawless, nangona Zokugqibela Quanta XV ayina bald iimpawu, kwaye eyona ibhinqa indima ngu Matt Benz, ngubani nicinge ukuba bamele Orton. Nangona kunjalo, Orton sele elifutshane blonde iinwele, kwaye Matt sele elide brown kwaye ngokuqinisekileyo ayina unye malunga iimoto.
I-wefilim ke inkcazelo ngu kancinci ridiculous, kodwa ke explicit ngokwaneleyo ukwenza kuthi hesitate malunga olunzulu, kwaye ukuba uxelela kuthi ke ngcono hayi touch kuyo. Sinako ibinzana lomhlathi i-uzibeke, nangona, kwaye wefilim ke premise kukuba Matt fixes Sean ke imoto entlango xa ngabo yahlasela nge troll ukuba Matt sibulala, emva kokuba yena discovers ngu hayi kuphela rhamncwa yena ke oza ibandakanye. Ke cacisa ukuba ngaba yintoni ekubeni insinuated apha. Njengoko a fan ka-omdala imidlalo, ingaba njengoko disappointed njengoko sisebenzisa?
Thina balingwe Haydee - umdlalo kuba ngabantu abadala kwaye patients (18+)
Haydee njengoko omnye indie isihloko kunye kancinci bakudala-fashioned gameplay mechanics iselwa surprisingly shreds phakathi omdala imidlalo, kodwa ke ayisosine nje ngenxa protagonist ke oversized breasts. Emva zonke, umdlalo ngenene sele kakhulu ixesha. Efana nezinye ezininzi omdala imidlalo, kuya basenokuba umdla kwabanye ngocoselelo kunoko gamers phakathi kwenu abaya kuba umonde kuba kujike kunzima kwaye confusing puzzles kwaye inyathelo moments ukuba balandele kwi kamva "amagumbi". Endleleni, umdlalo sele malunga ne-160 "amagumbi", uthi i-ababhekisi phambili.